Cishe wonke umuntu owadingeka athenge imishini yasendlini ekhishini, wazibuza: yikuphi i-oven engcono - igesi noma ugesi? Uma kuqhathaniswa namanani kagesi nezinketho zikagesi, umuntu angabona ukuthi amadivaysi okuqala azoba umholi ongathandabuzwayo. Nokho, ngokusho kochwepheshe, uhlobo lwesibili lungcono kakhulu kumama wendlu. Ukuze siqonde ukuthi yikuphi ihhavini okungcono - igesi noma ugesi, sizobe sinikeze isihloko esihlukile kule ndaba. Namuhla sizozithola zonke izici, izinzuzo nezimo zombili kokukhethwa kukho. Ngakho, i-ovini igesi noma ugesi - yikuphi okumele ukhethe?
Iyini imishini yegesi enhle?
Le nqubo ibonakale kakhulu kunokwedlula ugesi, futhi kuze kube manje ukuthandwa kwayo akukho mkhawulo. Yiziphi izici zayo? Okokuqala, abanikazi abaningi bathola amadivayisi anjalo ngokuqondile ngenxa yesigaba samanani. Bakha okungenani amaphesenti angama-20 kuya kwangu-30 kunaphansi kwe-analogs kagesi. Okwesibili, amadivayisi kagesi alula kakhulu ukusebenzisa. Ukupheka ukudla ku-ovens okunjalo kulula, ngoba abanakho imisebenzi enkulu. Yebo, ungakwazi ukulawula nokushintsha ukushisa nge-regulator eyodwa kuphela. Labo abangaqondi i-electronics bayakwazisa lokhu. Okwesithathu, ukudla ku-ovens okwenziwe ngegesi kulungiswa kakhulu kunokwesegesi. Empeleni, ukudla kusetshenzwa emlilweni ovulekile, okusho ukuthi ukushisa okushisa nakho kuphakeme.
Ekwehluleka kwamadivayisi kagesi
Igazi lensimbi noma ugesi - yini engcono? Ukuze uphendule lo mbuzo, ake sicabangele ukushiyeka kwalolu lwazi. I-ovens eyinhloko yezingxenye zegesi yingozi enkulu yomlilo nokuqhuma. I-ovini, njengazo zonke ezinye izinto zokusebenza zegesi, idinga imithetho ekhethekile yokusetshenziswa. Amadivaysi anjalo ayingozi kakhulu kubantu kunamadivaysi kagesi avamile. Ngisho negesi elingenalutho lokuvuza, awubeka ukuphila kwakho engozini kuphela, kodwa impilo yomuntu wonke okuzungezile, futhi ngemva kwayo yonke imiphumela ingaba yingozi. Ukuze uvimbele lokhu kungenzeki, akukho cala kufanele ufake i-oven ngokwakho. Kukhona ongoti kulokhu, futhi akufanele ulondoloze ngokufaka i-oven noma isitofu segesi.
Ukungahambi okulandelayo kwe-ovens gas kuyinto control abampofu control. Lawula ilangabi, ungakwazi kuphela, ngoba akukho thuluzi elizokwethula ekushiseni okuqondile ngokunemba kwe-degree 1 Celsius. Isikhathi esinconywe ukulungiselela isidlo esithile sizoba sesilinganiso.
Enye ukungalungi ukucoliswa okukhulu. Lokhu kungenxa yokuthi igesi linikezwa ukungcola okuhlukahlukene kanye nezithasiselo, okuthi, uma zishisiwe, zakha idiphozi efana nefilimu ye-wax. Ukugeza kulukhuni ngisho nokusetshenziswa kwama-agent abrasive. Ngendlela, izihlungi ezithombeni ziphinde zithole ingxenye yale diphozithi. Ngakho-ke, futhi kufanele bashintshe kaningi kakhulu.
Igazi lensimbi noma ugesi - yini engcono? Izinzuzo zama-analogue kagesi
Le nqubo ine-set of imisebenzi eyanele ukuze kulungiselelwe ukudla ngokushesha ngangokunokwenzeka besebenzisa inani elincane likagesi. Ngenxa yokusebenza okubanzi, ngisho nomama wesifazane onomdlavuza angazizwa njengompheki futhi apheke ukudla okumnandi. Ngakho-ke, i-oven kagesi iyisevisi eguquguqukayo ngokugcwele enayo yonke imisebenzi edingekayo ukuze kube lula futhi kulungiselele inqubo yokupheka.
Kubalulekile futhi ukuphawula ukuphepha okuphezulu kwalezi zixhobo. Ngokungafani nehhavini yegesi, ungaxhuma i-oven kagesi ngokwakho - vele uthenge i-outlet efanele ne-plug ku-plug. Inqubo enjalo ngeke ibambe umlilo futhi ngokuqinisekile ngeke iqhume, futhi ngisho nengane ingayisebenzisa.
Ukuhlanzeka kungenye yezindlela eziyinhloko zokupheka okufanele. Yingakho abakhiqizi benza amapuleti anjalo, okungekho nje ukungcola ezindongeni zedivayisi. Futhi uma ama-ovens kagesi enza i-plaque ephikisanayo, bese kungenjalo inkinga kagesi enjalo. Futhi empeleni, yiziphi izinhlobo ze-carbon deposits ezivela ku-TEN?
Uma sicabangela umbuzo wokuthi i-oven ingcono - igesi noma ugesi, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi kungenzeka ukulungiswa kokushisa okunembile kwalokhu okulandelayo. Futhi yonke imfihlo ukuthi i-regulator ekhethekile ivumela idivayisi ukusetha izinga elifunayo lokushisa ngokuchaneka kwe-degree 1 Celsius. Ezifanekisweni zegesi, akunjalo.
Ngezinkinga zehhavini kagesi
Njengoba sishilo ekuqaleni kwalesi sihloko, izindleko zamagesi kagesi zihluke kakhulu ngegesi, hhayi ekuhambeni okuhle komthengi. Ngenxa yokuthi intengo ejwayelekile yama-ovens afana namaphesenti angu-15 kuya phezulu kunabo bonke, abaningi bakhetha amadivayisi kagesi, naphezu kwazo zonke izinkinga ekusebenzeni kwazo.
Ukubhalisa ukwehluleka okuyinhloko kwala madivaysi, kufanele futhi kuqaphele ukuthembela kwabo ngokuphelele ekudleni. Kule ndaba, ochwepheshe abaphakamisi ukufaka kuwo kulawo makhaya lapho kunezikhathi eziningi zokuphuma kwamandla. Zahlulela wena - uma i-current ivuliwe efulethini, ifudumele ku-esitofu okungenani ngeke ukwazi ukusebenzisa i-ovini, ungabi yedwa usebenzisa i-ovini. Ngakho-ke, uma ukhetha, ngaso sonke isikhathi ungacabangi nje kuphela ukusebenza kobuchwepheshe, kodwa futhi nokuzinza kwenethiwekhi yakho kagesi.
Ngakho-ke, igesi se-ovini noma ugesi? Kungcono ukukhetha okukhethwa kukho okubizayo noma okubizayo? Ingabe kufanelekile ukukhokha imali? Ukubhalisa zonke izinzuzo nezinkinga zombili kokukhethwa kukho, akulula ukuthola ukuthi iyiphi ihhavini engcono - igesi noma ugesi. Umholi ongenamkhawulo amadivayisi kagesi ngokuqondile.
Iziphakamiso ezithandwayo kulezi zinsuku
Ukulula nokucaca ekusebenziseni.
Ikhono lokuqapha nokubeka ngokunembile ukushisa.
Ukupheka okungafani kwesidlo.
Ezomnotho ngokusetshenziswa kukagesi. Igesi ekugcineni libiza kakhulu, futhi lihamba ngokushesha kunegesi, ngakho-ke leli gesi lithembisa kakhulu.
Ama-ovens anjalo aphethwe ngamandla amaningi, ngakho-ke ungashisi umoya.
Ngemuva kokupheka, akudingeki uhlanze izindonga zedivayisi kusuka kudiphozi.
Yimuphi i-oven kagesi engcono? Ukuhlolwa kochwepheshe kwabakhiqizi
Emakethe yaseRussia, kunezinketho eziningi ezifanele ezisebenzisana nenethiwekhi yamandla kagesi e-220 V. Uma ekugcineni wanquma ukuthenga ihhavini elinjalo, qaphela abakhiqizi abalandelayo:
"Bosch" (izindleko ezilinganiselwayo cishe ama-euro angu-800-950).
Ikea (eshibhile emakethe yomhlaba - izindleko ezijwayelekile cishe ngama-euro angu-200-220).
"Miele" (ngendlela, le tanuri iyona elula kakhulu ekunakekeleni, kulula ukuyihlanza).
Bahlanganyela ekwakhiweni kwemishini yasendlini esezingeni eliphakeme, futhi amayunithi yalezi zinkampani, ngokusho kokubuyekezwa, athembekile ekusebenzeni, okwezomnotho futhi elula ukunakekelwa.
Ngakho, sithole ukuthi yiziphi i-ovens ezihamba phambili. Njengoba ungabona, ikusasa liwugesi, ngakho-ke uma ufuna ukuthenga imishini iminyaka eminingi, uthengise amayunithi anjalo.
Hlanganisa ipompo nge-switch switch: isimiso sokusebenza kanye nempendulo
Izinhlobonhlobo zezigqoko zamadoda
Indlela yokusebenzisa izimpande ze-burdock kumuthi womuntu